एनसीएचएलका विभिन्न प्रणालीहरू मार्फत आ. व. २०७७÷७८ मा फर्छ्यौट गरिएको नगद रहित भुक्तानी कारोबार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा तीन गुणाले बढी रहेको छ ।
गत आ.व.मा एनसीएचएलले कुल ४ करोड ४७ लाख भन्दा बढी भुक्तानी कारोबार फर्छ्यौट गरेको छ, जुन अघिल्लो आ.व.को तुलनामा ११७ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
त्यसैगरी एनसीएचएलले रकमको आधारमा १३ खर्ब रुपैयाँ, २०.९ करोड डलर, २४.९ करोड यूरो र जीबीपी २७.२ करोड बराबरको रकम आफ्ना विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरू मार्फत फर्छ्यौट गरेको जनाएको हो ।
उक्त आ.व.मा चेकको कारोबार २१ प्रतिशतले, एनसीएचएल आईपीएसमा ९४ प्रतिशतले र कनेक्ट आईपीएसमा ५६६ प्रतिशतले कारोबार बृद्धि भएको छ । यसरी तथ्याङ्क हेर्दा चेकबाट हुने कारोबारको बृद्धि स्थिर हुँदै गइरहेको छ भने डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूको उपयोग भने उल्लेख्य रुपमा बृद्धि हुँदै गएको कम्पनीले जनाएको छ ।